INFINITY 3000 entsha ye-Adder Technology inika Abasakazi Ukufinyelela Kwangempela kwesikhathi | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-Adder Technology entsha ye-AdDERLink ™ INFINITY 3000 Inika Ama-Broadcasters Ukufinyelela Kwangempela Kwezokusakaza
Okuqukethwe okuhle kunomvuzo ongcono kakhulu ongasakazwa ngabachwepheshe bezokusakaza. Kodwa ezingumphumela womkhiqizo kudinga ubuchwepheshe sokunene ukuthi kube isethulo lezinkanyezi. Uma zokudala ungathola uxhumano kwesokudla ukuze ukuletha okuqukethwe kwabo, lokho kwenza ukuba lokufinyelela emiphakathini yabo nemiphumela engcono. Kungakho imboni inabaholi bokuxhumana abanjengo I-Adder Technology owethula izixazululo zokuxhumeka nokusebenza okuphezulu, ngokungangabazeki amaphuzu avelele ekhanda labo elisha, elihlangene, i-USB 2.0 IP KVM extender, i I-ADDERLink ™ INFINITY 3000.
Mayelana I-Adder Technology
Kusukela ngonyaka ka-1984, I-Adder Technology Ukhule waba ngumholi womhlaba wonke kwizisombululo zokuxhuma nokusebenza okuphezulu kwe-IP KVM. Adder's Ifa lobuchwepheshe selisakazekele ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni kwemikhiqizo ehamba phambili emakethe eletha abathengi womqondo wokulawula nokuthula kwengqondo ngokulawulwa kwezicelo ezibucayi, ezinhlobonhlobo zezimboni.
I-Adder Technology isebenza njengebhizinisi elinomvuzo nelishukumisayo ukuba yingxenye futhi lizigabise ekuhlinzekeni indawo ethokozisayo nenobuchule yokukhula nempumelelo yesikhathi esizayo. Adder's uhla lokushintsha, ukunwebeka, kanye nezixazululo ze-IP zinika amandla ukuthembeka okuthembekile kwezinhlelo zasendaweni, ezikude, nezomhlaba jikelele kwezimboni ezifana nokusakaza, umyalo nokulawula, ukuthutha, ukubhenka, ezokwelapha kanye ne-federal. Le nkampani idume ngobuhle bayo bobuchwepheshe, ukusebenza okuthembekile, nokwenza izinto ngokuqina, futhi uhla lwayo oluphelele lwemikhiqizo luhambisana nomsebenzi ophelele ohlinzekwayo, onika amakhasimende enhlobonhlobo yezimboni ezahlukahlukene ukunwebeka, ukushintsha, matrix nokuphatha ukudetha kungaba kwasendaweni noma nge-IP. I-Adder Technology isiza ukuxazulula ukuxhuma ukuxhumeka kwe-IT kanye nezinselelo zokufinyelela kude kwezicelo ezibucayi zemishini ezinhlobonhlobo zezindawo, kanye nokusebenza kwayo okusha I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, Ke Usazoqhubeka afeze feat ezinjalo.
Ngaphambilini kulo nyaka, i I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, noma ALIF3000, wadedelwa. The ALIF3000 ihambisa ukufinyelela kwesikhathi sangempela emishini engakhawulelwe engokomzimba neyibonakalayo kusuka kusixhumi esibonakalayo somshini womuntu (HMI). Lolu chungechunge lwedivayisi luhlelwe kahle ngokuphelele ukuze luxhase ochwepheshe bezokusakaza kwezemidlalo kanye nochwepheshe bokukhiqiza njengoba bebheka ukuzuza ngokuguquguqukayo namathuba wokukhula anikezwe izinhlelo zokusebenza ezifakiwe. Lokhu kubuye kubenze bakwazi ukufinyelela ngaphandle komthungo yomshini womzimba kanye nama-desktops ebonakalayo ngesikhathi sangempela. Ngaphezu kwe I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, I-Adder Technology ine-solution ye-4K IP KVM yemiklomelo eminingi, i ADDERLink ™ KWAPHAKADE 4000 Series, kanye ne-ADDERLink ipep +. Lokhu kunika amandla ochwepheshe bezokusakaza nabezindaba ukufinyelela nokuhlela HD ividiyo evela noma kuphi emhlabeni jikelele njengokungathi ixhunyiwe endaweni.
The ALIF3000 sika ukwakheka kuyayivumela ukuthi ihlanganise ukufinyelela kwe-VM kunethiwekhi ekhona ye-ADDERLink INFINITY ngaphandle kokubhekana nokuphazamiseka, isikhathi sokuphumula noma imali ebizayo. It is eyakhelwe yimpumelelo Intel® X-86 sekhompiyutha izakhiwo, evumela ukuthi ukuletha ikhwalithi yesithombe pixel-ephelele, alalelwayo USB 2.0 izikrini olulodwa noma ezimbili phezu 1GbE isixhumanisi olulodwa.
Ngokuhlanganisa i ALIF3000 ne IMenenja ye-ADDERLink INFINITY (AIM), abaphathi bangachaza ngokucacile amalungelo avikelekile wokufinyelela kwabasebenzisi ukuqinisekisa ukuthi ama-PC okuhlosiwe angafinyelelwa kuphela abasebenzisi abavunyelwe - enikeza abanikazi bebhizinisi ukuthula kwengqondo nokuqiniseka.
Izici ezingeziwe ze ALIF3000 zihlanganisa:
Ext. Ibanga: Akunamkhawulo ngaphezulu kwe-IP / 100m ngaphezulu kwe-CATx noma i-fiber
Isinqumo: Kufika ku-2560 ×[Email protected]
Inani lezikrini: Kufika ku-2
Ngeminye imininingwane mayelana ALIF3000, vakashela www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-3000.
Kungani I-Adder Technology Muhle Kubasakazi
Adder's ifa eliyiminyaka emithathu nengxenye livumile ukuthi lisebenzisane nabasakazi abavela emhlabeni jikelele ekwakheni nasekwenzeni ukushintshwa kwe-KVM switch, bandise nezixazululo ze-matrix ukusekela ukuhamba komsebenzi okugcwele. Futhi lokhu kugeleza komsebenzi kusukela ekudalweni nasekukhiqizweni kwangemuva kokusakaza amakamelo wokulawula nezindawo ezisethwe bukhoma. Adder Technology umoya webhizinisi ushuthekwe kahle kusiko lenkampani elisebenza ngokuzikhandla, ligqugquzela, ligubha, futhi lisungula njalo emkhakheni wobunjiniyela kwezobuchwepheshe oqhubeka nokuba phambili. I-Adder Technology ilungele abasakazi abafuna ukubhekana nezisombululo zokuxhumana eziphumelelayo kanye ne-IP KVM esebenza kahle.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana I-Adder Technology Ukuvakashela www.
I-Adder Technology ADDERLink ipeps + I-ADDERLink ™ INFINITY 3000ADDERLink ™ INFINITY 3000 ADDERLink ™ KWAPHAKADE 4000 Series ALIF3000 Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe ukusakaza uchwepheshe lwenethiwekhi izixazululo futhi ukusebenza okuphezulu IP KVM sokuqukethwe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-Litra Matthews isikhombimsebenzisi esisodwa somshini womuntu I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo 2020-05-14
Ngaphambilini: IPenny Arcade isebenzisa i-Blackmagic Design ATEM Mini switchcher yokusakaza bukhoma ukugeleza
Olandelayo: I-DPA Microphones 'MMA-A Digital Audio Interface Ifakazela Kubalulekile Emisebenzini Evela-Ekhaya